ngomphathi ku 21-06-10
Umazibuthe Wazanywa Ukusetyenziswa kwiTshayina Yamandulo
Ipropathi yokufunxa isinyithi yemagnetite ifunyenwe ixesha elide. Kwimiqulu esithoba ye-Lu yasentwasahlobo kunye neAnumn Annals, kukho intetho ethi: "ukuba unobubele ngokwaneleyo ukuba ungatsala intsimbi, ungakhokelela kuyo." Ngelo xesha, abantu babiza "ubutsalane" njengo "bubele". Th ...
Ufumaneka nini kwaye phi uMazibuthe
Imagnethi ayenziwanga ngumntu, kodwa yinto yemagnethi yendalo. AmaGrike amandulo kunye namaTshayina afumana ilitye elinemagnethi yendalo kwindalo Libizwa ngokuba "ngumazibuthe". Olu hlobo lwelitye lunokuncanca ngomnatha iziqwenga zentsimbi kwaye zihlala zikhomba kwicala elinye emva kweswi ...